गुगल एनालिटिक्सको प्रोफाइल फिल्टरहरूमा Semalt गाइड
सेगमेन्टहरू प्रयोग गरेर वेब एनालिटिक्स विश्लेषण गर्नु यसलाई उत्तम तरीका हो। गुगल एनालिटिक्सले कस्टम भेरिएबलहरू, प्रोफाइल फिल्टरहरू, र उन्नत खण्डहरू डाटाको सेगमेंटका सब भन्दा शक्तिशाली तरीकाहरू प्रदान गर्दछ। अर्को लेखमा, ओलिभर किंग, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, प्रोफाइल फिल्टरहरू छलफल गर्न जाँदैछ।
यो एक दीर्घ-अवधि विभाजन रणनीति हो, र कसैले यसलाई परिवर्तन वा मेटाउन सक्दैन। विज्ञहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई एक कच्चा डाटा प्रोफाइल हुने सल्लाह दिन्छन् जुन उनीहरू प्रक्रियामा गलत भएमा ब्याकअपको लागि प्रयोग गर्न सक्दछन्। गुगल एनालिटिक्स परिवर्तन ईतिहासले प्रोफाइल फिल्टरहरूमा गरिएका परिवर्तनहरू ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ। प्रोफाइल फिल्टरहरू अब वास्तविक समय रिपोर्टहरूमा लागू हुन्छन्, जुन नयाँ फिल्टरहरूको परीक्षणको लागि आवश्यक छ। नयाँ प्रोफाइल को परिणाम हेर्नुहोस् र वास्तविक समय मा कुनै गल्ती सुधार्नुहोस्।
दस उपयोगी गुगल एनालिटिक्स प्रोफाइल फिल्टर
१. आईपी ठेगाना समावेश गर्नुहोस्
यो लक्ष्य उपलब्धिलाई परीक्षण गर्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक हो। यदि एक ठूलो कम्पनी को लागी काम गर्दछ भने, त्यहाँ संभावना छ कि त्यहाँ उही ठेगानामा अन्य व्यक्तिहरू छन्। गुगल एनालिटिक्स फिल्टर ट्याब अन्तर्गत, नयाँ सिर्जना गर्नुहोस्, नाम दिनुहोस्, र पूर्वनिर्धारित फिल्टरको साथ बक्स जाँच गर्नुहोस्। निम्न आईपी ठेगानाहरूबाट विशेष रूपमा ट्राफिक समावेश गर्न छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको हालको आईपीको मापदण्डसँग मेल खान्छ।
२. IP ठेगाना निकाल्नुहोस्
प्रोफाईलहरू सेट अप गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ जुन कम्पनी र ज्ञात तेस्रो पक्षहरूद्वारा उत्पन्न गरिएको आन्तरिक ट्राफिक बहिष्कार गर्दछ। यसको कारण यो हो कि यी आगन्तुकहरूसँग असामान्य पृष्ठ दृश्यहरू र व्यवहार छन् जुन "विशिष्ट" पाहुना भन्दा फरक छ जसको लागि साइट मालिकहरूले उनीहरूको साइटलाई अनुकूलन गर्दछन्। फिल्टर जानकारी अन्तर्गत, अनुकूल फिल्टर चयन गर्नुहोस्, र चेकबक्सलाई समावेश नगर्नुहोस्। फिल्टर फिल्डले आईपी ठेगाना पढ्नुपर्दछ, र फिल्टर फिल्टर सम्मिलित गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। यस फिल्टरको लागि कुनै केस संवेदनशीलता छैन। तपाईं IP ठेगाना दायरा उपकरण प्रयोग गरेर ठेगानाहरूको दायरा फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ।
Spec. विशिष्ट अभियान समावेश / समावेश नगर्नुहोस्
यदि तपाईं एक ठूलो सीपीसी अभियान चलाइरहनु भएको छ र तपाईंले काम गर्ने कुनै पनि एजेन्सीहरूसँग यस जानकारीमा पहुँच गर्न चाहनुहुन्न भने, फिल्टरले सीपीसी डाटा उनीहरूको प्रोफाइलबाट बहिष्कृत गर्न मद्दत गर्न सक्छ। उही फिल्टर जानकारी अन्तर्गत, फिल्टरलाई नयाँ नाम दिनुहोस् जस्तै "सीपीसी आगन्तुकहरू बहिष्कार गर्नुहोस्" र यसलाई कस्टम फिल्टर लेबल असाइन गर्नुहोस्। बाह्य बक्स जाँच गर्नुहोस् र फिल्टर फिल्डमा "अभियान मध्यम" चयन गर्नुहोस्। फिल्टर ढाँचा सीपीसी हो, र यो केस सेन्सिटिभ छैन।
Lower. अभियान विशेषताहरूमा लोअरकेस
ठूलो कम्पनी हो, अभियान ट्याग गर्ने प्रक्रियाहरूको संख्या बढी छ। सबै भन्दा पहिले, यो महत्वपूर्ण छ कि कडा निर्देशनहरू को पालन गर्न को लागी कसरी एक आफ्नो अभियान को नाम दिनु पर्छ। यस समस्यालाई पार गर्नका लागि UTM अभियान प्यारामिटरहरूमा पाँच लोअरकेस फिल्टरहरू थप्नुहोस्। यसले अभियान माध्यम, स्रोत, सामग्री, अवधि, र नाम समावेश गर्दछ। नयाँ नाम चयन गर्नुहोस् जस्तै "अभियान विशेषताहरूमा लोअरकेस"। कस्टम फिल्टर क्षेत्र अन्तर्गत, "लोअर केस" छनौट गर्नुहोस् र फिल्टर अभियानको रूपमा "अभियान मध्यम" प्रविष्ट गर्नुहोस्। यसले गुगल एनालिटिक्समा सजिलो विश्लेषणको लागि डाटा सफा गर्न मद्दत गर्दछ किनकि यसले सबै मध्यम दर्ताहरूलाई मानक गर्दछ।
Lower. लोअरकेस अनुरोध यूआरआई मा
यूआरएलले दुबै लोअरकेस र अपरकेस क्यारेक्टरहरू लिन सक्दछ वेब न सर्भरले पुनःनिर्देशित नगरेको परिणामस्वरूप। दुई समान पृष्ठहरू, बिभिन्न चरित्रको साथ, दुई फरक विचारहरूको रूपमा रेकर्ड गर्न सक्दछ / Us युएस / र / अउर-यूएस / जस्ता समान सामग्रीमा फिर्ता नेतृत्वमा। यस समस्यालाई सुधार्नका लागि नयाँ फिल्टर बनाउनुहोस् र एउटा नाम दिनुहोस् "लोअरकेस अनुरोध युआरआई मा।" यो लोअरकेस बक्स जाँच गरिएको एक अनुकूलन फिल्टर हो। फिल्टर फिल्डले "URI अनुरोध गर्नुहोस्।"
Host. URI अनुरोध गर्न होस्टनाम संलग्न गर्नुहोस्
यदि गुगल बहु-डोमेन कार्यान्वयनमा चलाउँछ र दुई डोमेनहरूको लागि सबै डाटा एक प्रोफाईलमा संकलन गर्दछ, दुई नामहरूको बिच फरक छुट्याउन सजिलो नहुन सक्छ। माध्यमिक आयाम वा होस्टनाम थपेमा समस्या समाधान हुन मद्दत पुर्‍याउनु पर्छ। फिल्टरलाई नाम दिनुहोस् जस्तै "URI अनुरोधलाई होस्टनाम संलग्न गर्नुहोस्" र यसलाई अनुकूलित बनाउनुहोस्। "उन्नत" चेकबक्स जाँच गर्नुहोस्। क्षेत्र A बाट एक्स्ट्र्याक्ट गर्न को लागी होस्टनाम हुनुपर्दछ, जबकि फिल्ड बी को निकाल्ने बी "अनुरोध यूआरआई" हुनुपर्छ। "आउटपुट गर्न" - कन्स्ट्रक्टर पनि "अनुरोध यूआरआई।" सबै फिल्डहरू क्षेत्र बी बाहेक आवश्यक छन्, र केस संवेदनशील हुनुहुन्न।
Spec. विशिष्ट क्षेत्र (हरू) समावेश गर्नुहोस्
यस्तो समय हुन्छ जब एकले एक अन्तर्राष्ट्रिय अपील गर्ने वेबसाइट चलाउँछ र केहि क्षेत्रहरू फिल्टर आउट गर्नु पर्ने हुन्छ। निम्न फिल्टर प्रयोग गर्नुहोस्: नयाँ कस्टम फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस् र कल गर्नुहोस्, "समावेश Ne | Be | Ger" भन्नुहोस् र समावेश गर्न छनौट गर्नुहोस्। फिल्टर क्षेत्र "देश" र फिल्टर ढाँचा "नेदरल्याण्ड | बेल्जियम | जर्मनी" हुनु पर्छ र केस संवेदनशील हुनुहुन्न।
Mobile. केवल मोबाइल आगन्तुकहरू समावेश गर्नुहोस्
कम्पनीहरूले यो प्रयोग गर्नु पर्छ यदि उनीहरू मोबाइल आगन्तुक खण्डको प्रदर्शनलाई नजिकबाट हेर्न चाहन्छन्। सुझाव गरिएको फिल्टर नाम "मोबाइल समावेश गर्नुहोस्" हो र कस्टम फिल्टर हुनुपर्दछ। समावेश बाकस जाँच गर्नुहोस् र "मोबाइल" चयन गर्नुहोस्? फिल्टर क्षेत्र मा। फिल्टर पैटर्नमा "हो" चयन गर्नुहोस् र केस संवेदनशीलतामा "होईन"।
9. विशिष्ट उपनिर्देशिक मात्र ट्राफिक समावेश गर्नुहोस्
यदि कम्पनीको वेबसाइटमा ब्लग खण्ड सामेल छ र सामग्री लेखकहरू छन् जुन यसमा पोष्टहरू थप्दछ, त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन उनीहरूको डाइरेक्टरीमा पहुँच सीमित गर्ने सुविधाजनक हुनेछ। यसलाई ह्यान्डल गर्नका लागि "समावेश ब्लग ट्राफिक" नामको साथ पूर्व-परिभाषित फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस्। उप-निर्देशिकाहरूमा मात्र ट्राफिक समावेश गर्नुहोस् जुन "/ ब्लॉग / उपनिर्देशकको रूपमा सुरू हुन्छ। यो केस संवेदनशील हुनुहुन्न।
१०. विशिष्ट उपनिर्देशिक मात्र ट्राफिक समावेश गर्नुहोस्
यसले अन्य मानिसहरूलाई गुगल एनालाइटिक्स प्रोफाइल नम्बर लिन र अन्य डोमेनहरूमा राख्न रोक्न मद्दत गर्दछ। यसले चलिरहेको GA प्रोफाइल नम्बरको साथ एक स्टेजिंग वा परीक्षण डोमेनहरू पनि फिल्टर गर्दछ। नयाँ कस्टम फिल्टर नाम दिनुहोस् "उदाहरण डोमेन समावेश गर्नुहोस्" र समावेश छान्नुहोस्। योसँग "होस्टनाम" फिल्टर फाँट र "नमुनामेलोमेन \_ .com" फिल्टर फिल्टरको रूपमा हुनु पर्छ। यो केस संवेदनशील छैन।
११ बोनस: सबै प्रश्न प्यारामिटरहरू समावेश नगर्नुहोस्
टेक्निकल क्वेरी प्यारामिटरहरू फिल्टर गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ यदि हालको वेबसाइटमा उनीहरूसँग धेरै नै छ भने। यसले GA मा देखा पर्ने पृष्ठहरूको संख्या घटाउँछ, यसैले यसलाई अधिक अर्थ दिँदै। कस्टम फिल्टरको नामको रूपमा "सबै प्रश्न प्यारामिटरहरू" समावेश गर्नुहोस्। "उन्नत" चेकबक्स जाँच गर्नुहोस्। क्षेत्र A को एक्स्ट्रेक्ट गर्न अनुरोध URI हुनुपर्दछ, र फिल्ड B छोड्नुहोस् B खाली छोड्नुहोस्। "आउटपुट गर्न" - कन्स्ट्रक्टर पनि "अनुरोध यूआरआई।" सबै फिल्डहरू क्षेत्र बी बाहेक आवश्यक छन्, र केस संवेदनशील हुनुहुन्न।
एक फिल्टर अर्डर तोक्दै
गुगल एनालिटिक्स फिल्टरको कार्यान्वयन प्रयोगकर्ताले तिनीहरुलाई थपेको तरीकामा छ। प्रशासक ड्यासबोर्डमा प्रोफाइल सेटि inहरूमा तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सम्भव छ